Momba anay - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill Circuitsdia ekipa iray manana traikefa 10 taona mahery amin'ny orinasa PCB fanamboarana sy orinasa mpamokatra elektronika. Miaraka amin'ny velaran'ny famokarana 2000 metatra toradroa sy mpiasa mahay mihoatra ny 500, afaka manome anao fanamboarana PCB sy fivoriambe izahay avy eo amin'ny fihodinana haingana, prototype ka hatramin'ny famokarana boky.
Ny kalitao no laharam-pahamehanay voalohany, fomba iray ifotony amin'ny lafiny rehetra amin'ny fikirakirana ny angona, ny akora, ny injeniera, ny fanamboarana ary ny fanohanana ara-teknika omenay. Izahay dia ISO9001, ISO 14001 nankatoavina, UL nahazo fankatoavana. Ny famokarana rehetra dia manaraka ny fenitry ny IPC ary mifanaraka amin'ny takiana amin'ny fampiharana ary ny akora rehetra ampiasaina dia manana naoty ambony indrindra azo jerena ara-barotra.
Ankoatry ny kalitao, ny vidiny dia iray hatrany amin'ny fiheverana lehibe indrindra. Ny serivisinay dia hamela anao ho mpilalao mifaninana indrindra amin'ny tsenanao, amin'ny alàlan'ny fitazonana ny kalitao, ary hitondra anao ny lohany amin'ny resaka vidiny, fidirana amin'ireo ivotoerana famokarana atokana sy manokana any amin'ny firenena mpifaninana amin'ny vidiny. Ny fahalalantsika azy momba ny fananganana sy ny famotehana ny vidiny rehefa manao circuit board dia ahafahantsika mijery lavitra mihoatra ny toekarena tsotra amin'ny tahiry maridrefy ary matetika ny vokatra mitambatra fanitsiana maro dia mety hisy fiatraikany mahagaga amin'ny fandaniana ankapobeny. inona no azonay atao mba hampihenana ny fandaniana amin'ny birao mandeha.
Malemy paika amin'ny fangatahanay izahay. Ankoatry ny fitaovana mahazatra, ny haitao, ny fotoana itarihana sns, dia manandrana manantanteraka karazana takiana samihafa avy amin'ny mpanjifantsika hatrany am-piandohana haingana izahay amin'ny famokarana volavola mahomby.
Misaotra ireo mpiasa miasa mafy, ary manompo mihoatra ny 1000 eran'izao tontolo izao izahay. Ny vokatra sy serivisinay dia be mpampiasa amin'ny indostrialy, fitsaboana, fifandraisan-davitra, trano an-tsaina, Internet misy ary ny indostrian'ny fiara. Faly be izahay fa afaka manararaotra sy matoky anay ny mpanjifa. Ho setrin'izany dia manandrana hatrany ny dingana mialoha ho an'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny fanaporofoana ireo vokatra azo antoka amin'ny vidin'ny fifaninanana sy ny fotoana fitarihana tsara indrindra. Manantena mafy ny hiara-miasa aminao izahay.